सम्पादकीय Archives - Balsirjana
भाइबहिनीहरू ! अघिल्लो वर्षको शैक्षिक सत्र आज सुरु होला भोलि सुरु होला भन्दाभन्दै वर्षै बित्यो । सत्रको अन्तिम समयमा मात्रै कक्षामा परिचित हुन पाइयो । यो वर्षको शैक्षिक सत्र पनि त्यस्तै हुुने हो कि भन्ने चिन्ता छ । चैत्रको अन्तिमतिर विश्वका कतिपय देशमा कोरोना महामारीको संकट फेरि बल्झिन...बाँकी
भाइबहिनीहरू ! भदौ १६ देखि विद्यालय खुल्ने, रोकिएका परीक्षाहरू सञ्चालन हुने चर्चाले सबैलाई खुशी तुल्याएको थियो । अब अन्तराष्ट्रिय हवाई सेवा पनि खुल्ने, आन्तरिक हवाई सेवा पनि खुल्ने, लामोदुरीका सवारी साधन पनि खुल्ने भए भनेर सर्वसाधारणमा अर्कै उत्साह थपिएको थियो । जसरी पनि उद्योग व्यवसाय खुल्ने छन् भनेर...बाँकी
भाइबहिनीहरू ! सधैं नयाँ वर्षको शुभारम्भमा विद्यालय बन्द हुन्थ्यो । नयाँ नयाँ ठाउँमा घुम्ने अवसर पाइन्थ्यो । नयाँ झोलामा किताव कापी बोकेर, नयाँ नयाँ ड्रेस लगाएर, नयाँ जुत्ता लगाएर नयाँ कक्षामा जाने बेला हो तर बन्दाबन्दीका कारण यी सबै कुरा हुन पाएनन् । बरु हामी सबै जना घरको...बाँकी
एउटै टोलका साथीहरू पनि परदेशी जस्ता भए है !
भाइबहिनीहरू ! चीनबाट शुरु भएको कोभिड १९ ले सबैभन्दा बढी अमेरिकालाई प्रभावित बनाएको खबर हामीले सुनिरहेका छौं । ब्राजिल, बेलायत लगायतका ठूला र सम्पन्न मुलुकमा फैलिरहेको महामारीको मुख्य कारण सतर्कताको कमी मात्रै हो भन्ने कुरा विश्व स्वास्थ्य संगठनले बताइरहेको छ । तर हामी नेपाली भने सकेसम्म सतर्कता अपनाएकै...बाँकी
बालबालिकालाई घरायसी काम सिकाउने अवसर
भाइबहिनीहरू ! नेपालमा मात्रै होइन सारा विश्व कोभिड १९ कारण बन्दाबन्दीमा छ । नेपालमा पनि कोरोनाको संक्रमण दिन प्रतिदिन फैलिरहेको छ । यतिबेला बालबालिका र अभिभावक सबै जना घरमै बस्नु परेको छ । बिहानै स्कूलको झोला बोकेर हतार हतार कुद्नु पर्ने अवस्था छैन । त्यसैले यस्तो बेला उमेर...बाँकी